Amathiphu Wokumaketha Eholidini Lezokuthengisa Nezomnotho | Martech Zone
Amathiphu Wokumaketha Eholidini Lezokuthengisa Nezomnotho
NgoLwesithathu, Novemba 11, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Akumangalisi ukuthi abathengi abangama-78% bazocwaninga ngokuthengwa kwabo okulandelayo ku-inthanethi, kepha okumangazayo ukuthi bangaki abathengisi nezinkampani ze-ecommerce ezishiya ubukhona bazo kwi-inthanethi ngaphandle kwe-equation. Enye yalezi zinto ezingekho yiPinterest - the ehola ingosi yokuxhumana nabantu yokukhuthazwa kwezipho.
Eminyakeni emihlanu edlule, 75% wokukhula kokuthengisa kuye kwaba ngokusebenzisa ukuthengisa online. Ngenkathi iningi lokuthengisa lisenzeka ezitolo zezitini nodaka, akungabazeki ukuthi ubuchwepheshe bunamthelela muni ekukhuleni kokuthengisa. Kusukela ekwamukelweni kobuchwepheshe esitolo kuya ku-inthanethi, ukushada nakho kokubili ngaphandle komthungo kuyisihluthulelo sokukhula kokuthengisa.
ULauren Jung we Ishalofu unikeze lezi zihluthulelo ezi-3 zokwengeza ukuthengisa kokuthengisa ngamaholide
Qala kusenesikhathi - Abantu bathenga ngaphambi kunanini ngaphambili. Ngonyaka odlule, izinhlobo eziningi zathola ithrafikhi encane nokuthengiswa ngoba zazigxile kuphela kumaholide abalulekile ekhalenda (Black Friday, Cyber ​​Monday, njll.), Ngokungafani nokuqala kusenesikhathi njengaleyo mikhiqizo eyayicabanga ngaphambi kwepakethe.
Ungayinaki eyedijithali - Izitolo eziningi zezitini nodaka zicabanga ukuthi zingahamba kahle ngoba abantu bazozithola nje, kepha iqiniso liyatshelwa… abathengi benza ucwaningo lwabo ku-inthanethi ngaphambi kokuzama ukuthenga. Noma ngabe uyisitini nodaka noma isitolo esiku-inthanethi, ukutholakala ku-inthanethi kubalulekile.
Abathonya - yigagasi lekusasa, nendlela okufanele uhambe ngayo lapho uhlela ukumaketha kwakho kwamaholide. Akekho osabheka izikhangiso zamabhanela. Futhi okubaluleke kakhulu… Abantu abangama-200MMMillion basebenzisa izivimbeli zezikhangiso. Ngakho-ke imali oyisebenzele kanzima ayikuboni nokukhanya kosuku.
Tags: ithonya ledijithaliumthelela wedijithaliiholideukumaketha ngamaholideubuyelathengisa okuningithengisa izinto eziningiishalofu
Ukumaketha kwe-imeyili okuzenzakalelayo nokusebenza kwayo